Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l1212 zom
Zoma 21 Sept.
“Nanafatra ny fiangonana ny apostoly Paoly tsy hiandry ny fiavian’i Kristy ho amin’ ny androny. ‘Tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, hoy izy, ka hiseho ilay lehilahin’ ota’. Raha tsy aty aorian’ilay fihemorana lehibe, sy rehefa mifarana ny fotoana lavabe hanjakan’ ‘ilay lehilahin’ota’, dia tsy afaka manantena ny fiavian’ny Tompontsika isika. Ilay ‘lehilahin’ota’ izay lazaina koa fa ‘zava-miafin’ny tsy fankatoavan-dalana’, ‘zanaky ny fahaverezana’, sy ‘ilay tena mpandika lalàna’ dia mampiseho ny fahefana papaly, izay, araka ny voalaza mialoha ao amin’ny faminaniana, dia hitana ny fahefany fara-tampony mandritra ny 1260 taona.” - HM, t. 370.
“Ho fara-tampony amin’ny asa famitahana lehibe dia i Satana mihitsy no hiseho vatana hilaza tena ho Kristy.... Malefaka sady tony dia tony, nefa miritsodritsoka toa feonkira mahafinaritra ny feony. Teny malefaka sy mitory famindrampo no entiny milaza indray ny sasantsasany amin’ireo fahamarinana feno fahasoavana avy any an-danitra izay efa nambaran’ny Mpamonjy; manasitrana ny aretin’ny olona koa izy, ary amin’izay izy eo am-pakan-tahaka ny toetran’i Kristy dia mihambo ho efa nanova ny Sabata ho Alahady ka mandidy ny olona rehetra hanamasina io andro efa notahiny io.... Izay nazoto nianatra ny Soratra Masina ihany ary izay nandray ny fitiavana ny fahamarinana ihany no ho voaaro amin’ny fitaka mahery vaika izay hamabo an’izao tontolo izao.” - tt. 650-651.
“Rehefa mitory ny hafatra ianao, aza manao teny mamely amin’ny fomba manokana fiangonana hafa, eny fa na dia ny Fiangonana Katôlika Rômanina aza. Misy olona maro any amin’ireo fiangonana maro samihafa hitan’ny anjelin’ Andriamanitra, olona izay tsy ho voataona raha tsy amin’ny alalan’ny fitandremana fatratra indrindra. Noho izany dia aoka isika hitandrina tsara ny teny lazaintsika (...) Miteny ho azy ny fanginana mikasika ireo lohahevitra ireo. Maro no voafitaka. Resaho amin’ny feo sy fiteny feno fitiavana ny fahamarinana.” - EV, t. 576.
• Maro ny olona amin’izao fotoana izao no mino fa efa niova ny fanjakana papaly, ary tena marina tokoa izany amin’ny lafiny sasany. Eo amin’ireo resaka fototra mikasika ny famonjena anefa, dia mbola miezaka ny misandoka izay rehetra nataon’i Kristy sy ataony ho antsika ihany izy. Mbola izy ihany ilay fahefana voalazan’ny faminaniana. Ahoana no fomba hijoroantsika tsy azo hozongozonina eo amin’ny fampianarana ara-Baiboly mikasika an’i Rôma, kanefa etsy an-danin’izany, manao izany araka ny fitiavana sy ny fahari-po ary ny fahaiza-mifandray kristianina?
• Amin’ny maha-fiangonana antsika, dia mifanehatra mandrakariva amin’ny olona izay maneho datin’andro vaovao mikasika ireo toe-javatra hiseho amin’ny andro farany isika, na koa tabilao vaovao, na fampianarana vaovao mikasika ny antoko izatsy na ny antoko izaroa. Marina fa tsy maintsy misokatra amin’ny fahazavana vaovao isika, kanefa amin’ny fomba ahoana no tokony hiatrehantsika ireny fihaikana ireny?
Famintinana : Tamin’ny nanitsiany ireo fomba fijery sasany nananan’ny Tesalônianina mikasika ny toe-javatra hiseho amin’ny andro farany no nanomezan’i Paoly antsika ny fahamarinana sarobidy mikasika io lohahevitra io. Tsy maintsy tsaroantsika mandrakariva anefa, na izany aza, fa tsy ny fotoana filaharan’ireo zavatra hiseho na ny tsipiriany rehetra mikasika izany no tena zava-dehibe momba ny resaka andro farany, fa ny hoe ankolafin’iza no tiantsika hisy antsika eo amin’ny ady lehibe ifanaovan’ny tsara sy ny ratsy.